Egbu egbughị egbugbu, otu esi edozi ya n'enweghi obi nkoropụ | Igbu egbugbu
Ejiri egbugbu na-adịghị mma, otu esi edozi ya n'enweghị obi nkoropụ
Diana Millan kwuru | | Ogbugbu
Ikekwe ọ dịtụla mbụ na ihe si na ihe ị na-achọ agụụ igbu egbugbu adịghị ka anya gị. Ma nke ahụ bụ Ogbugbu egburu nke ọma nwere ike bụrụ ezigbo nro.
Offọdụ n'ime unu agabigala ahụmịhe a ma mara ihe ọ bụ. Maka ndị ọzọ, tinye onwe gị n'ọnọdụ. Tochọrọ egbugbu gị ihe akara maka gị, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ọ bụ unicorn ma ọ bụ foto nwa gị. Ọfọn, ọ bụghị otu ihe ahụ, n'ezie ọ bụghị otu njikọta na unicorn dị ka nwatakịrị. Vinghapụ unicorns na ụmụaka, ndakpọ olileanya ị na-ewere dị ukwuu.
Ihe kachasị mkpa n'ọnọdụ ndị a abụghị obi nkoropụ. Anyị maara na iyi akwa egbugbu bụ nnukwu ihe mmechuihu, mana ka ha na-ekwu, ihe niile nwere azịza ma e wezụga ọnwụ. Ya mere, nwee obi ụtọ, enwere ike idozi ya.
Maka ahụike uche gị, ihe mbụ ị ga-eme bụ inye onye na-ese egbugbu ọgụ. Anyị niile nwere ike ihie ụzọ, mana n'otu oge ahụ anyị kwesịrị ịmata oke anyị. Ma ị bụ ọkachamara na mpaghara ahụ, ọ bụrụ na ịhụghị onye a zụrụ azụ, emela ya!
Ozugbo anyị kụrụ rapapolvo ma hapụ ikuku, iku ume. Mee nlekọta dị mkpa, ma ozugbo a gwọchara ya, ọ bụ oge iji dozie ya. Enwere ọtụtụ nhọrọ, dabere na ụdị egbugbu ị mere, ị nwere ike ilekwasị ya anya n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
Ngwọta maka egbugbu emezighituri:
Na-ekpuchi: dabere na nha na mgbagwoju anya nke imewe ahụ, ọ ga-abụ nke kachasị dị irè.
Na-etinye ihe osise ahụ na egbugbu ọzọ: O siri ike ịme, mana anyị nwere ike ịme ya nke ọma.
Nyochaa egbugbu ahụ: Ọ bụ ezie na ị chere na enweghị ọgwụgwọ enwere ezigbo ndị ọkaibe nwere ike idozi nnukwu adịghị mma ị nwere ike iche n'echiche.
Laser: Ọ bụrụ na ahụmịhe ahụ jọgburu onwe ya nke na ị pụghị ịhụ agịga, ị nwere ike ịbanye na laser. Ọ dị oke ọnụ, na-egbu mgbu na usoro ahụ dị ogologo, mana n'ụzọ nkịtị "ihe ị tufuru."
Nke a bụ nsonaazụ nke ụfọdụ nsonaazụ.
mwekota na egbugbu
Karịsịa, agaghị m ada mbà ikwugharị ya, gwa gị nke ọma. Tupu i jiri egbugbu e mere nke ọma chọọ onye na-ese egbugbu nke kacha adabara ụdị ịbịaru ị chọrọ. Ikekwe ọ dị oke ọnụ ma ọ bụ nwee ndepụta nchere, mana n'ezie ị gaghị echegbu onwe gị banyere nsonaazụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ejiri egbugbu na-adịghị mma, otu esi edozi ya n'enweghị obi nkoropụ
Tatoos nwere akara nkịta, ụtụ kachasị mma na akpụkpọ gị
Igbu egbugbu na nkebi ahịrịokwu dị mkpirikpi na Bekee maka ụmụ nwanyị